यी हुन् ह’र्मोन असन्तुलन हुँदा देखिने स’मस्या, यस्ता सं’केतबाट गर्नुहोस् पहिचान - Nawalpur Dainik
यी हुन् ह’र्मोन असन्तुलन हुँदा देखिने स’मस्या, यस्ता सं’केतबाट गर्नुहोस् पहिचान
ह’र्मोन असन्तुलनको कारण शरीरमा केही असामान्यता वा असुविधा देखिन सक्छ । विषेशगरी म’हिलाहरूमा गर्भावस्था, मासिक धर्म र मेनोपजको समयमा ह’र्मोनको स्तरमा परिवर्तन हुने गर्छ। तर, केही औषधि वा स्वा’स्थ्य स’मस्याका कारण पनि क’हिलेकाहिँ हर्मोनहरू असन्तुलित हुन जान्छ । शरीरमा हा’र्मोनको असन्तुलनका कारण धेरैजसो महिलाहरूमा यी लक्षणहरू देखिन्छ वा महशूस हुने गर्छ। पर्याप्त निद्रा पाउन नसके वा सुते उठ्दा पनि सन्तुष्ट हुन नसकेमा हार्मोन असन्तुलित भएको कारण यस्तो भएको हुन सक्छ । ओभेरिमा बन्ने हर्मोन प्रोजेस्टेरोनले गर्दा सुत्न प्रेरित गर्छ। तर, उक्त हर्मोनको स्तर सामान्यभन्दा कम भएका निन्द्रामा स’मस्या हुन थाल्छ । यसबाहेक, एस्ट्रोजेन हर्मोनको अभावमा राति पसिना आउने गर्छ जसले निन्द्रामा असर गर्छ ।
सामान्य रूपमा ह’र्मोनको असन्तुलनको कारण जहिले पनि थकान महशूस हुन सक्छ । प्रोजेस्टेरोनको अधिक मात्राका कारण निन्द्रा र थकान महशूस हुन्छ । एस्ट्रोजेन स्तरमा कमीको कारण स्वभावमा अचानक निराशा, दुस्ख तथा चाँडै रिस उठ्न सक्छ । यो अवस्थामा आवश्यकताभन्दा बढी भोक लाग्ने र धेरै खान मन लाग्ने हुन्छ । जसकारण छिटो तौल बढ्न सक्छ । केही अवस्थाहरूमा हर्मोन असन्तुलनको लक्षणमा भने एकैपटक धेरै तौल घट्नु पनि हुन सक्छ । महिलामा महिनावारीमा परिवर्तन आउनु पनि हर्मोनको कारणले गर्दा हुन्छ। एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन हर्मोनको अधिक वा अभावको परिणामका कारण महिनावारी ढिलो हुने, वा महिनावारीको समयमा स’मस्या देखा पर्ने हुन सक्छ। एन्ड्रोजन हर्मोनले तेल ग्रंथिलाई अधिक सक्रिय गर्दा असन्तुलन हुने कारण महिनावारीको समयमा पिम्पल आउने गर्छ। अनुहारमा कपाल आउनु पनि हर्मोन असन्तुलनको कारण हुने गर्छ । याे पनि पढ्नुहाेस् !
अप्रेसन गरेर ब’च्चा जन्माउने महिलाले ध्या’न दिनुप’र्ने यी ५ कुरा,नत्र पर्न स’क्छ स’मस्या: ब’च्चा जन्माउँदा गरिने ‘सी’जरियन सेक्सन डे’लिभरी’ (अ’प्रेशन गरी बच्चा जन्माउने) लाई लिएर विभिन्न्न भ्रम सुन्न पाइन्छ । प्रसूती तथा स्त्रीरो’ग विशेषज्ञ डा शितल अग्रवालका अनुसार सीजरियन सेक्सनको भ्रम र वास्तविकता यस्ता छन्ः
१‍) पहिलो बच्चा जन्माउँदा अ’प्रेशन गरिएको छ भने दोस्रो बच्चा जन्माउनका लागि तीन वर्षको अन्तर राख्नु राम्रो हुन्छ । तीन वर्ष भन्दा कम अन्तरमा बच्चा जन्माउँदा फेरि अ’प्रेशन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसले खतरा बढाउँछ । २) अ’प्रेशन गरी बच्चा जन्माएका महिला पहिलो ४० दिन भित्र कुनै शा’रीरिक गतिविधि नगर्न वा ६ महिनासम्म जिम जान नहुने साझा मान्यता छ । तर यो केबल मिथ्या मात्र हो । सामान्य शा’रीरिक गतिविधि गर्दा त्यसले शरिरलाई सशक्त बनाउँछ । सामान्य हिडडुल गर्न सकिन्छ तर पहिलो ४० दिन भित्र धेरे गहौं सामाग्री उचाल्नु हुँदैन ।
३) अ’प्रेशन पछि केही आमाहरुमा तत्काल स्तनपान गराउनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ । अ’प्रेशन लगत्तै वा सोही दिनदेखि स्त’नपान गराउँदा कुनै असर पर्दैन । ४) अ’प्रेशन गरेको भोलिपल्ट अर्ध तरल पौष्टिक भोजन ग्रहण आग्रह गरिन्छ । चिल्लोयुक्त तरल पर्दाथ खानु हुँदैन । तेस्रो दिनदेखि आइरन र फाइबरयुक्त तरल खानेकुरा खान सकिन्छ । ताजा फलफुल, सागसब्जी, खानुपर्छ । डिहाइड्रेसनबाट बच्न पानी वा तरल पदार्थ प्रशस्त खानुपर्छ । सन्तुलित पोषण खानुपर्छ जसले अनावश्यक रुपमा तौल बढ्न दिदैन् ।
५) डेलिभरीपछि आफ्नो र शि’शु दुबैको स्वा’स्थ्यमा ख्याल गर्नुपर्छ । आफूलाई चिसो र ए’लर्जीबाट बचाउनु पर्छ । हाच्छिँउ आउँदा शल्यक्रिया गरेको स्थानमा अस’र पर्नसक्छ । अ’प्रेशन गरेको केही दिन एकदमै सिधा वा तन्किएर उभिनु हुँदैन । कोल्टे फेर्नु पर्दा पनि परिवारका सदस्यको सहयोग लिनुपर्छ । धेरै आराम र प्रर्याप्त मात्रामा सुत्ने गर्नुपर्छ ।
Prevकिड्नी ड्या’मेज हुनुअघि शरीरले दिन्छ यस्तो सं’केत, यी लक्षणलाई ख्याल गर्नुहोस
Nextदादको स’मस्याबाट है’रान हुनुहुन्छ ? यसरी पाउनुहोस् घरेलु उपायबाट छुट’कारा